प्लेनमा जन्मिएका बच्चाहरूले कुन देशको नागरिकता पाउँछन् ? - Kaiphiyat
September 29, 2021 12:59 am
ताजा अपडेट TRENDING
नागरिककाे सामान्य समस्या पनि समाधान गर्न नसकेकाे गुल्मीकाे मुसिकाेट नगरपालिका !
महिलाका यी अं’ग छोएपछि हुन्छन् शा, रीरिक स’म्बन्धका लागि तयार
जहाँ बेहुलाको साथीहरुले उतार्छन् बेहुलीको कपडा !
कोरोनाविरुद्ध दोस्रो डोज खोप लगाउन ढिलो भए के हुन्छ?
प्लेनमा जन्मिएका बच्चाहरूले कुन देशको नागरिकता पाउँछन् ?
Posted By कैफियत Posted On
काठमाडाैँ । प्लेनमा बच्चा जन्मियो भने उक्त बच्चाले कुन देशको नागरिकता पाउला त ? यो हामी सबैको दिमागमा घुमिरहेको प्रश्न हुनसक्छ । तर, कतिपयले भने थाहा पाइसकेको हुन सक्छ ।
विशेषतः यस्तो अवस्था आइपर्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न देशले छुट्टाछुट्टै नियमहरू बनाएका हुन्छन् । उदाहरणका लागि हाम्रै छिमेकी देश भारतमा कुनै पनि गर्भवती महिलाले ७ महिनाको गर्भावस्थामा प्लेनमा यात्रा गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
तर, आपत्कालिन अवस्थामा उनीहरूले प्लेनमा यात्रा गर्न पाउनेछन । सामान्यतया प्लेनमा जन्मिएका बच्चाहरूले बच्चा जन्मिँदा प्लेन कुन देशको सिमानामाथि उडेको छ सोही देशको नागरिकता पाउने नियम छ । कतिपय अवस्थामा प्लेनमा जन्मिने बच्चाहरूले उडेको देश र ल्याण्ड हुने देशकै नागरिकता पाउने व्यवस्था पनि छ ।
यदी प्लेनमा नै बच्चाको जन्म भएको अवस्था उक्त बच्चाका आमा बुवाहरूलाई पनि कुन देशको नागरिक बनाउने भन्ने अधिकार दिइएको हुन्छ । यस्ता घ’टना एकदमै कम हुन्छन् । पछिल्लो समय २०२० को सेप्टेम्बरमा युकेबाट इजिप्ट गइ रहेको प्लेनमा एक जना बच्चाको जन्म भएको थियो ।
Previous: आशंकाले अत्यायो प्रचण्ड–माधव समूहलाई
Next: के पेट फुल्ने समस्या छ, कतै ग्यास्ट्रोप्यारेसिस हो की ? जान्नुहोस् लक्षण र उपचार
© All Right Reserved Kaiphiyat 2021
Design BY : Kaiphiyat | Powered BY : BA